Age of Civilizations II 1.01415_ELA Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.01415_ELA လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Age of Civilizations II
Age of Civilizations II ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ယဉ်ကျေးမှု II ၏အသက်အရွယ်မာစတာသေးခက်ခဲသင်ယူဖို့ရိုးရှင်းတဲ့သောခမ်းနားမဟာဗျူဟာ wargame ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကိုထွက်သွေးထွက်သို့မဟုတ်သင်တို့ရှေ့မှကိုးကွယ်ကြမည်နည်း အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုဥစ္စာ ..
ယဉ်ကျေးမှု II ၏အသက်အရွယ်ဟာဝေးအနာဂတ်သို့ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ဦးဆောင်၏ခေတ်ထဲမှာစတင်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်, အသက်အရွယ်အားဖြင့်အသက်အရွယ်၏တပြင်လုံးကိုသမိုင်းမှတဆင့်ဝင်
သမိုင်းက Grand ကင်ပိန်း
အကြီးဆုံးအင်ပါယာကနေအသေးငယ်ဆုံးအမြိုးအထိအဖြစ်အများအပြားယဉ်ကျေးမှု Play နဲ့လူသား၏အနာဂတ်ရန်လူ့ယဉ်ကျေးမှု၏အရုဏ်ကနေနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ spanning တစ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်ဘုန်းအသရေမှသင်၏လူများဦးဆောင်လမ်းပြ
In-ဂိမ်းအယ်ဒီတာများကို အသုံးပြု. ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းကိုဖန်တီး
ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာကြီး Create က play!
မြေယာထဲ့ Editor ကို
Age of Civilizations II အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
tpmtshop စတိုး 70 215.22k
APK အေၾကာင္း Age of Civilizations II အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.01415_ELA
ထုတ်လုပ်သူ Łukasz Jakowski
လက်မှတ် SHA1: DF:10:EA:CC:73:DB:C4:09:30:7C:FE:42:EE:9B:D2:E0:10:5B:57:F8
Age of Civilizations II APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ